“Man United aad ayey ugu deg degtay inay cayriso Mourinho” – Marouane Fellaini – Gool FM
“Man United aad ayey ugu deg degtay inay cayriso Mourinho” – Marouane Fellaini
Haaruun October 12, 2019
(Yurub) 12 Okt 2019. Ciyaaryahankii hore ee Red Devils kaasoo hadda ku sugan Shiinaha gaar ahaan kooxda Shangdong Luneng ayaa sheegay in macallinka reer Portugal ee Jose Mourinho aan la siinin waqti uu ku dhiso kooxda.
Marouane Fellaini ayaa rumeysan in macallimiintii ugu dambeeyey ee kooxda soo maray oo dhan aan la siinin waqti ku filan ka hor inta aysan cayrinin Manchester United.
Tan iyo markii uu Sir Alex Ferguson ka fariistay Man United sanadkii 2013-kii kaddib 27 sanadood oo uu guulo ku hoggaaminayey kooxda ayaa waxaa soo maray macallimiin badan oo kala ahaa David Moyes, Louis van Gaal iyo Jose Mourinho kuwaasoo aan la siinin waqti ku filan oo ay kooxda ku dhisaan sida uu aamisan yahay Fellaini.
Fellaini oo dhammaan macallimiintaasi kala soo shaqeeyey garoonka Old Trafford waxa uu rumeysan yahay in Man United aysan fursad u siinin inay kooxda waqti ku qaataan oo ay dib u dhis ku sameeyaan.
Macallinka haatan kooxda hoggaamiya ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa isaguna cadaadis dhexda kaga jira waxaana la warinayaa in la cayrin doono haddii uusan natiijooyin fiican la imaan labada kulan ee soo aaddan horyaalka Premier League.
Ciyaaryahankan kaasoo ka tagay Manchester kuna biiray kooxda Shandong Luneng ee ka dhisan horyaalka Shiinaha ee Chinese Super League ayaa u sheegay Wargeyska Daily Mail: “Waxay keensadeen Moyes, waqtina ma siinin, waxay keensadeen Van Gaal, waxay siiyeen labo sano, waxaan bilownay inaan waxyaabo qaar qabanno, wuxuu ku guuleystay koob, laakiin intaas kaddib waa ay ceyriyeen macallinkii, maxaa yeelay waxay rabaan inay si dhaqso leh u guuleystaan.
“Aniga ahaan kooxdu waxay si deg deg ah ugu ceyrisay Jose Mourinho, maxaa yeelay tababare sidaan oo kale ah oo imaanaya wuxuuna u baahan yahay ciyaartoy badan si ay u sameeyaan falsafaddiisa.
“Wuxuu doonayay inuu dhiso kooxdiisa, laakiin labo sano iyo bar kaddib waxay go’aansadeen inay shaqada ka cayriyaan, sababtoo ah natiijooyin halkaas kama jirin.
“Dhibaatadaas waa inay xal wadajir ah u raadiyaan, macallin sida Van Gaal ah, taatiko ahaan aad ayuu u xoog badan yahay, waana qibrad badan yahay, waana ay cayriyeen.
“Waxay keensadeen mid ka mid ah tababarayaasha ugu fiican adduunka Jose Mourinho, wuxuu doonayay inuu koox dhiso oo way cayriyeen.
“Ma fududa in la dhiso koox waqtigaas, waxaad u baahan tahay wax kabadan labo sano.
“Ma aqaan waxa ay ku sameyn doonaan Ole, Mourinho xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay, wuxuu sameeyay wax layaab leh, wuxuu horumariyay kooxda, waxyaabo ayuuna ku guuleystay.
“Okay, xilli ciyaareedkii labaad, xoogaa waa uu adkaa, laakiin wuxuu isku dayay oo sameeyay intii karaankiisa ahayd inuu kooxda ka caawiyo.”
Macallinka xulka France ee Didier Deschamps oo ka hadlay dhaawaca N'Golo Kante… (Miyuu yahay mid halis ah?)
Mourinho oo shaaca ka qaaday ciyaartoygii ugu fiicnaa ee uu arkay… (Ma ahan Ronaldo iyo Messi!)